Interview – Page2– सकारात्मक परिवर्तनवाहक विचार, कला/साहित्य र सत्य खवरको बाटाे
नेपालगञ्ज । देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपाल ५ नं. प्रदेशको सम्मेलनको उद्घाटन सत्र भव्य रुपमा सम्पन्न भएको छ । बाँकेको नेपालगञ्जमा एक भव्य सभाका बीच मोर्चाका केन्द्रीय सचिव परि थापाले प्रमुख अतिथिको रुपमा सम्मेलनको उद्घाटन गरे । मोर्चाका केन्द्रीय सचिवालय सदस्य तथा ५ नंं प्रदेशका संयोजक केवी गुरुङको अध्यक्षता तथा नेता हिरामणि दु्ःखीको सञ्चालनमा सम्पन्न कार्यक्रममा […]
देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपालको नेतृत्वमा १५ दिने मेची–महाकाली अभियान सम्पन्न गर्नु भएको छ । समग्रमा कस्तो रह्यो यो अभियान ? उद्देश्य हासिल गर्न अभियान कत्तिको सफल रह्यो ? –देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपालले यहि ०७५ फागुन ७ देखि २१ सम्म –मेची–महाकाली जनजागरण तथा जनपरिचालन अभियान’ संचालन गरेको थियो । फागुन ७ गते यसको उद्घाटन एकै साथ […]
Posted in: २०७४–चुनाव, Interview, National News, Politics, Tippani Bislesion
महान् जनयुद्धको २४ औं दिवसको अवसर पारेर देशैभर ‘रातो मार्चपास’ प्रदर्शनको तयारी गरिरहनु भएको छ । यो ऐतिहासिक दिनको सन्दर्भमा गर्न लागिएको रातो मार्चपासमार्फत् नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)ले दिन खोजेको सन्देश के हो ? स्पष्ट पारिदिनुस् न । देशैभर रातो मार्चपास गरेर महान् जनयुद्धको २४ औ दिवस मनाउने जुन कार्यक्रम हाम्रो पार्टीले तय गरेको छ, त्यसको […]
वर्तमान सरकारको क्रियाकलापलाई कसरी लिनु भएको छ ? संसदीय व्यवस्था हालको दलाल नोकरशाही तथा पुँजीवादी व्यवस्था हो । यसको चरित्र अरु व्यवस्थाभन्दा फरक हुन्छ । त्यो भनेको यो व्यवस्थाभित्र हुने भ्रष्टाचार नै हो । कम्युनिष्टहरुले घोषित रुपमा यसलाई भ्रष्टाचारीहरुको व्यवस्था भन्ने गर्दछन् । नेपालको सन्दर्भमा त यही भ्रष्टाचारी व्यवस्थामा पनि दुईतिहाइ बहुमत लिएर आफूलाई कम्युनिष्ट […]
Posted in: Bichar, Feature News, Interview, mainNews
भ्रष्टचारीहरुमाथि कारबाही थालेसंगै अहिले क्रान्तिकारी युवा लिग चर्चामा छ । काठमाण्डौ र सुर्खेतमा गरिएको कारबाही बारे केही बताइदिनुस् न । ठीक हो, क्रान्तिकारी युवा लिग जस्तो राष्ट्रिय स्वाधीनता, जनतन्त्र र जनजीवीकाको पक्षमा निशर्त र निरन्तर संघर्ष गर्ने संगठन चर्चामा आउनु राम्रो कुरा हो । साथै म ती साथीहरु, जसले भ्रष्टाचारीहरुमाथि कारबाही गरे ती साथीहरुलाई स्याल्युट […]
अहिले उपचार गराइरहनु भएको छ, कस्तो महसुस गरिरहनु भएको छ ? रोगले स्वयम् रोगीमा पनि र आफन्तहरुमा आतंक सिर्जना गर्दोरहेछ । वरपरका छिमेकीहरुलाई पनि आतंकित बनाउँदो रहेछ । उपचार गर्दा र त्यसमा पनि क्यान्सर जस्तो रोगकोे उपचारका लागि अन्तिम उपाए र उपचार पद्धति किमो चढाउने भनेको अर्काे झन् ठूलो आतंक हुदो रहेछ । यो अवस्थासम्म […]
नेवाः राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको महासचिवमा निर्वाचित हुनु भएकोमा बधाइ । संगठनको यो जिम्मेवारी लिंदा कस्तो महसुस गरिरहनु भएको छ ? सर्वप्रथम त तपाईलाई पनि धन्यवाद । हाम्रो गौरवशाली मोर्चाकोे सांगठनिक जिम्मेवारी लिन पाउँदा खुशी त हुने नै भैहाल्यो । विगत लामो समयदेखि मोर्चामा नै छु । केही समय पार्टीको विभाजनको कारण यताउता भइयो । यो […]
अहिले देशको राजनीति कहाँ पुगेको जस्तो लाग्छ ? गत निर्वाचनपछि कम्युनिस्ट पार्टी अथवा वामपन्थीको नाममा दुईतिहाईको बहुमत लिएर सरकार बन्यो । यसले कथित ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ भन्ने नारा दियो । यसले आफैमा उनीहरुको हालसम्मको काम हेर्दा उनीहरुको विगतको आश्वासन र गतिविधिको धज्जी उडेको छ । देश चाहिँ विगतमा जुन अवस्थामा रहेको थियो, त्यहिँ अवस्थामा […]
नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)को हालै सम्पन्न केन्द्रीय समितिको बैठकले लिएका निर्णयहरुको मूल स्पिरिटबारे संक्षिप्तमा प्रकाश पारिदिनुस् न । हाम्रो गौरवशाली पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (क्रान्तिकारी माओवादी)को हालै बुटवलमा केन्द्रीय समितिको बैठक सम्पन्न भयो । नेपाल यतिखेर जुन अत्यन्त विकराल परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको छ, त्यस सन्दर्भ माथि विचार गर्दा यो बैठकको ठूलो महत्व छ । यसले लिएका […]
देशमा राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका समस्याहरु विकराल बनेर गएका छन् । जनताले विकल्प खोजिरहेका छन् । नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) ले आफूलाई विकल्पका रुपमा कसरी तयार पारिरहेको छ ? प्रश्न धेरै गम्भीर प्रकारको उठाउनु भएको छ । देशको स्थिति भयावह नै छ । देशमा वामपन्थी नाम गरेको पार्टी सरकारमा छ । यसले चुनावताका निकै रंगीचंगी सपनाहरु […]